OTU ESI EME MA MEZIE ỌNỌDỤ ABALỊ NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Kwado ma hazie ọnọdụ abalị na Windows 10
Ọtụtụ ndị ọrụ, na-etinye oge dị ukwuu na nlekota oru kọmputa, n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ emesịa malite ichegbu onwe ha gbasara anya ha na ahụike ha n'ozuzu. Na mbụ, iji belata ibu ahụ, ọ dị mkpa iji wụnye ihe omume pụrụ iche nke na-egbukepụ radieshon na-abịa site na ihuenyo ahụ na-acha anụnụ anụnụ. Ugbu a, a ga - enweta ihe yiri nke ahụ, na ọbụna nsonaazụ dị irè site na iji ngwaọrụ Windows, ọ dịkarịa ala, nke iri ya, ebe ọ bụ na ọ bụ na ụdị ọnọdụ ahụ bara uru pụtara "Ìhè nke abalị", ọrụ nke anyị ga-akọwa taa.
Ụdị abalị na Windows 10
Dị ka ọtụtụ atụmatụ, ngwaọrụ na njikwa nke sistemụ, "Ìhè nke abalị" zoro ya "Ngalaba"nke anyị ga-achọ ịkpọtụrụ gị ka ị nwee ike ma hazie atụmatụ a. Ya mere, ka anyi bido.
Nzọụkwụ 1: Gbanyụọ "Ìhè nke Oge"
Site na ndabara, ọnọdụ abalị na Windows 10 anaghị arụ ọrụ, ya mere, nke mbụ ị chọrọ iji mee ya. A na-eme nke a dị ka ndị a:
Meghee "Nhọrọ"site na ịpị bọtịnụ òké aka ekpe (LMB) na mbụ na menu mmalite "Malite"na mgbe ahụ na akara ngosi nke usoro usoro nke mmasị dị n'aka ekpe, nke e mere n'ụdị gọọmentị. N'aka ozo, i nwere ike iji igodo "Nyenụ m"Pịa nke na-anọchi usoro abụọ a.
Na ndepụta nke nhọrọ dịnụ maka Windows gaa mpaghara "Usoro"site na ịpị ya na LMB.
Jide n'aka na ịchọta onwe gị na taabụ "Gosi", tinye mgbaaka na ọnọdụ ọrụ "Ìhè nke abalị"emi odude ke ikpehe item "Agba", n'okpuru oyiyi nke ngosi.
Site na ịmegharị ọnọdụ abalị ahụ, ị ​​nwere ike ọ bụghị naanị nyochaa otú ọ na-eleba anya n'ụkpụrụ na-adabaghị adaba, mana ọ ga-emekwa ka ọ dịkwuo mma-na-ege ntị ka anyị ga-eme ọzọ.
Nzọụkwụ 2: Hazie ọrụ ahụ
Ịga na ntọala "Ìhè nke abalị", mgbe ị na-enyere ọnọdụ a aka, pịa njikọ ahụ "Ngalaba nke ìhè abalị".
Na mkpokọta, enwere nhọrọ atọ dị na mpaghara a - "Kwado ugbu a", "Agba ụcha n'abalị" ma "Nhazi oge". Ihe nke bọtịnụ mbụ akara na onyinyo dị n'okpuru bụ doro anya - ọ na-enye gị ohere ịmanye "Ìhè nke abalị", n'agbanyeghị oge nke ụbọchị. Nke a abughikwa ngwọta kachasị mma, ebe ọ bụ na a chọrọ naanị ọnọdụ a naanị na mbubreyo mgbede na / ma ọ bụ n'abalị, mgbe ọ na-ebelata nsị anya, ọ dịghịkwa mfe ịbanye n'ime ntọala oge ọ bụla. Ya mere, iji gaa usoro ntuziaka maka ịmalite oge ọrụ ahụ, megharia mgbanwe ahụ na ọnọdụ nọ n'ọrụ "Na-eme atụmatụ ìhè abalị".
Ọ dị mkpa: Akara "Mmiri Okpomọkụ", akara na nseta ihuenyo na ọnụọgụgụ 2, na-enye gị ohere ịchọpụta otú oyi (n'aka nri) ma ọ bụ ọkụ (n'aka ekpe) ga-abụ ìhè nke e gosipụtara n'abalị site ngosipụta. Anyị na-akwado ịhapụ ya ọ dịkarịa ala na ọnụ ahịa dị ala, mana ọ ka mma ịkwaga ya n'aka ekpe, ọ bụghị na njedebe. Nhọrọ nke ụkpụrụ "n'akụkụ aka nri" bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-abaghị uru - anya anụ ahụ ga-ebelata ntakịrị ma ọ bụ ma ọlị (ma ọ bụrụ na a ga-ahọrọ aka nri dị mma).
Ya mere, ka ịtọ oge gị iji gbanwee ọnọdụ abalị, rụọ ọrụ mbugharị ahụ "Na-eme atụmatụ ìhè abalị"wee họrọ otu n'ime nhọrọ abụọ ahụ - "Site na Dusk Till Dawn" ma ọ bụ "Tọọ elekere". Malite na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ ma na-agwụ na mmalite oge opupu ihe ubi, mgbe ọ na-agba ọchịchịrị n'isi ụtụtụ, ọ ka mma ịnye ntinye aka na ntinye onwe gị, ya bụ, nhọrọ nke abụọ.
Mgbe ị na-achọpụta igbe dị n'ihu igbe ahụ "Tọọ elekere", ị nwere ike ịmepụta oge na oge "Ìhè nke abalị". Ọ bụrụ na ị họrọ oge "Site na Dusk Till Dawn"N'ụzọ doro anya, ọrụ ahụ ga-agbanye mgbe anyanwụ dara na mpaghara gị ma gbanyụọ na ụtụtụ (maka nke a, Windows 10 ga-enwe ikikere iji chọpụta ọnọdụ gị).
Iji tọọ oge ọrụ gị "Ìhè nke abalị" pịa na oge a kapịrị ọnụ na nke mbụ họrọ awa na nkeji nke ịgbanwu na (ịpịgharịa ndepụta ahụ na wiil), wee pịa akara akara iji kwenye, ma kwugharịa otu usoro ahụ iji gosipụta oge ịgbachi.
N'ebe a, site na ngbanwe nke arụ ọrụ nke abalị, ọ ga-ekwe omume ịmechaa, ma anyị ga-agwa gị ihe ndị ọzọ banyere nuances dị iche iche nke na-eme ka mmekọrịta dị mfe na ọrụ a.
Ya mere maka ngwa ngwa ma ọ bụ gbanyụọ "Ìhè nke abalị" ọ dịghị mkpa iji na-ezo aka "Ngalaba" sistemụ arụmọrụ. Naanị ịkpọ "Ụlọ Ọrụ Nchịkwa" Windows, wee pịa na ọ bụ ọrụ maka ọrụ anyị na-atụle (nọmba 2 na nseta ihuenyo n'okpuru).
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịmegharịgharịa ọnọdụ abalị ahụ, pịa aka nri (RMB) n'otu ebe ahụ "Ụlọ Ọrụ Ịkọwapụta" wee họrọ ihe dị naanị n'ime ihe dị n'ime ya. "Gaa na njedebe".
Ị ga-ahụ onwe gị ọzọ "Ngalaba"na taabụ "Gosi"site na nke anyị malitere ichebara ọrụ a echiche.
Hụkwa: Ọrụ anatara n'ọrụ na Windows 10 Os
Dị ka nke a, ị nwere ike ịrụ ọrụ ahụ "Ìhè nke abalị" na Windows 10, wee dezie ya maka onwe gị. Atụla egwu, ma ọ bụrụ na agba agba na ihuenyo ga-adị ka ọkụ (odo, mmanụma, na ọbụna na-acha uhie uhie) - ị nwere ike iji nke a na ọkara otu awa. Mana ihe kachasị mkpa adịghị eri ahụ, ma eziokwu ahụ bụ na ọ dị ka ihe na-abaghị uru nwere ike belata nsogbu ahụ na anya n'abalị, si otú ahụ belata, nakwa, ikekwe, wepụ kpamkpam mmetụ anya n'oge ọrụ ogologo oge na kọmputa. Anyị nwere olileanya na obere ihe a bara uru nye gị.